Sidee baan Edit karaa ama Guba DVD la Adobe jilitaankii?
Sida loo Guba DVD isticmaalaya Adobe jilitaankii
Adobe jilitaankii waa mid ka mid ah ugu wanaagsan ee Movie iyo multimedia qalabka tafatirka laga helo suuqa maanta. Waxaa loo isticmaali karaa si ay u qabtaan hawlo kala duwan oo ka soo video iyo abuuridda content, jaridda, si tafatirka iyo saamaynta, si maqal ah iyada oo loo marayo in dhoofinta iyo keenista.
Adobe jilitaankii pro CS6 yimaado la Encore horeba lagu daro nidaamka si ay u fududeeyaan habka abuurista DVD Blue-ray ama disc warbaahinta ah. Habkaani u ogolaanayaa in la abuuro iyo DVD qoraalka ama Blue-ray disk ka gudahood codsiga. Waxaa loo isticmaali karaa si ay u gubaan DVD Blue-ray iyo cajaladaha. Qoraalka DVD Blue-ray ama Saxannada ama gubashada si toos ah waxay u baahan tahay dhoofinta warbaahinta, in version hore, markaas oo sheegaya encore ka menu barnaamijyada (daaqadaha) Isticmaalka Adobe jilitaankii Pro CS6, Dhoofinta filim ama cid kale oo wax ku doodeen waxaa la samayn karaa iyadoo la isticmaalayo Encore. Qoraalkan waxa ku xisaabtanay in aad horey u aad u ogaato sida loo edit filimka iyo dar content in waqtiga filimka la shaqeeyaan saamayn movie. Waxaa halkan ka sharaxayaa sida in la abuuro mashruuc oo way gubi doonaan inay DVD isticmaalaya Encore.
Mashruuca encore In la abuuro, la raaco qaybta 1. Markaas part 2 inta badan wadahadalo ku saabsan sidii loo gubi mashruuca si DVD isticmaalaya encore soo socda. Haddii aysan u shaqeeyaan, ay helaan xal ee qaybta 3.
Qeybta 1: Sida loogu Diyaariyo Mashruuca
Qeybta 2: Sida loo Guba Project in ay DVD
Qaybta 3: Ka Error ah aan la garanayn ayaa u uruuriyey filimka
Qaybtani waxay muujinaysaa sida aad uga bilaabi karaa iyadoo la abuurayo mashruuca encore ah. Waxa uu isticmaalaa CS6 version of Adobe jilitaankii Pro.
1. Laga soo bilaabo barnaamijyo aad, bilowdo Adobe jilitaankii Pro .
2. Marka uu furmo suuqa ugu weyn ee u muuqataa, dooro File menu.
3. Dooro Adobe Mishiinkan link ka menu file iyo doortaan dir Encore waxa uu kuu furayaa shaashadda sidan: (image encore-dialog.png).
Fiiro gaar ah: Tallaabada saddex sidoo kale la fulin karo doorataa file menu, markaas dhoofin ka dibna warbaahinta . Dooro goobta looga baahan yahay goobta. Marka la dhoofiyo ayaa la sameeyaa, oo aad ka furan kartaa mashruuca ka encore. CSS6 yimaado la adobe link firfircoon oo fududeyneysa habsocodka.
4. On the aasaasiga ah tab, ee New Project wada hadal, ku qor magaca ah disc gelin magaca sanduuqa aqbasho. Waxa kale oo aad ka bedeli kartaa magaca mashruuca ka sanduuqa Magaca aqbasho.
5. baddalo goobta si loo badbaadiyo mashruuca Encore adigoo gujinaya ka Browse button iyo xulashada meesha aad rabto in mashruuca badbaadiyey. Waxad abuuri kartaa gal ama folder dooro jira meesha mashruuca waa la badbaadin doonaa.
6. Dooro habka qoraalka ka aagga goobta. Ogow in ay tani ku xirnaan doontaa in aad qoraalka ah Blue-Ray ama DVD. (Hab Tani waa la bedeli karaa ka Goobta mashruuca mustaqbalka haddii aad rabto).
7. Haddii aad doonayso inaad transcode warbaahinta ka hor qoraal ahaan DVD ah, Riix goob transcode default . Button iyo Change sida ay baahidaada loo baahan yahay. Goob default ayaa waxaa lagu sugi karaa haddii ay jirto saamayn gaar ah loogu talo galay ma. Waxa kale oo aad bedeli goobaha kale ee ka horumarsan tab.
8. Click OK button mar aad samaysay oo dhan dejinta goobaha la doonayo in suuqa kala encore ah.
Laga soo hadal New Encore Project, waxaad u baahan tahay dhigay qaab file aad jeclaan lahayd inaad u isticmaashaa saxaafada diirada (DVD ama Blue-ray) iyo meesha ay sidoo kale qarka u saaran inuu badbaadiyo file ka dib markii aad u dhoofiyaan. Under goob mashruuca, xulo hab qoraalka iyo qaababka kale ee la jecel yahay. Fursadaha soo socda waxaa laga heli karaa:
1. DVD-hal lakab ama Duo-lakabka, dooro MPEG2-DVD . Taas waxaa la samayn karaa sanduuqa goob wada hadal ah.
2. kaliya lakabka badan ama lakab cajalid ray Blue, xusho MPEG2 Blue-ray ama H.264 Blue-ray .
Fiiro gaar ah: Dooro qaabka uu ku xiran yahay meel ka disc la heli karo iyo nooca disc in aad doonayso in aad isticmaasho in aad mashruucan. Labada fursadaha la heli karo waa DVD Blue-ray iyo cajalladaha. Tani waa in la soo xulay sida in ay tahay haboon dhagaystayaasha bartilmaameedka. Waxaan kula talin lahaa isticmaalaya MPEG2 Blue-Ray ah ee video ama filin in uu ka hooseeyo 1 saac 45min. Tani waxay ku haboon in meel la heli karo iyada oo aan lumin ama qulqulaya ka meel lagu keydiyo ama laga badiyay Hufnaan loo baahan yahay ee goobta. The goobaha kor ku xusan waa la beddeli karaa miiska goobaha ay ku meel shaqada ka yar.
Marka aad buuxiso kor ku xusan, suuqa kala ahaanayaa Sida mid hoos ku qoran:
Tafatir movie sida aad rabto. Dalbashada saamaynta iyo ku beddelaan waqtiga iyo video in Suite ujeedadda. Sidoo kale ku dar DVD menu sida looga baahan yahay navigation fudud iyada oo aad movie.
Waxa kale oo aad magaca karaa weelka time-line adigoo gujinaya ee guryaha tab on Murayaad saxda ah Tifaftiraha iyo sameynta isbedelada sida waxay u baahan tahay. Suuqa guryaha waa sida ku cad xaq.
Waxa kale oo aad ka bedeli kartaa guryaha kale sida qof (ka Character tab) iyo metadata (ka metadata tab)
1. Haddii aad u abuuray DVD menu, hubi on tab menu on suuqa kala mashruuca si aad u aragto in.
2. Waxaa loo magacaabay sida la doonayo. Sidoo kale in la hubiyo in xawaaraha ayaa lagu wadaa in inta jeer ee la aqbali karo.
3. Waxaad ku eegaan karo DVD ah adigoo riixaya batanka Xiisaha Leh.
4. waxa uu u suurtogelin doonaa in la ogaado oo loo go'aamiyo haddii wax walba ka shaqaynayso sidii la filayay iyo menu (haddii la heli karo) waa in si sax ah. Hoos dhekhso waxay muujinaysaa DVD muunad istuuray ah.
5. Marka aad ku eegaan, waxaad eegi kartaa disk ee wax qalad ah u qortaa filayaa by click on File menu, Dooro Project hubi. Marka baaritaanka waa dhameystiran yahay, ku siin doonaa digniin ah ama qalad ah oo aad u baahan tahay inay ka qayb galaan si ay u ka hor inta aadan sii wadaan in ay tallaabada xigta.
6. Mar walba waxaa la dhigay iyo shaqada, aad diyaar u tahay in ay gubaan DVD faylasha aad. Tani waxay noqon doontaa tallaabadii u dambaysay.
Riix dhista tab on Murayaad saxda ah. (Hel soo socda waxa ku jira tab). Haddii kale waxaad riixi kartaa File ka dooro dhista . Si aad u hesho fursadaha mashruuca dhismaha heli karo.
Select / dhigay fursadaha looga baahan yahay fursad u heli karo.
Marka shahaado la mashruuca, geliso disc DVD / buluug-ray galay drive DVD ah.
Guji ka Murayaad saxda dhis button.
Marka aad dhammeysato habka kor ku xusan, Encore gubi doonaa bedeley iyo videos gal disc DVD / Blue-ray. Ogsoonow in habka qaadan kartaa qaar ka mid ah waqtiga si loo dhamaystiro, waxaad u baahan tahay oo dhan waa inay samir iyo sugaan. Dabcan taasi ku xirnaan doonaa xajmiga ee mashruuca iyo nooca warbaahinta aad diiwaan on.
Qaybta 3: Ka Error dahsoon loogu uruuriyey filimka
Waa quruxsan toos ah sahalna loo Guba aad video files gal DVD la Adobe jilitaankii. Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga yaabaa jeer aad ku keeneen in fariin qalad ah oo muujinaya in ay jirto qalad ah oo aan la garanayn loogu ururinayay filimka.
Haddii abid ka dhaca, kaliya double-hubiso haddii ay jiraan wax line cas oo aad videos in waqtiga kor ku xusan. Haddii ay haa tahay, in la micno noqoneysaa in uu jiro jaanqaadayn mashruuc aad video iyo inta u dhaxaysa. Isku day inaad mar kale dhoofinta aad video files iyo arko haddii ay u shaqayso. Waayo, macluumaad, Adobe lagu joojin lahaa Encoder Media ugu dhakhsaha badan oo halkan ka, waxaad u baahan doontaa inaad eegto kale ah. My jeedin waa Wondershare Video Converter Ultimate . Kale badan idin ​​siinayo fursad u gubi aad video files gal DVD ah, sidoo kale iyaga oo aad edit karaa si kastaba ha ahaatee aad rabto. The Video Converter Ultimate hubaal ah uu leeyahay muuqaalada dheeraad ah oo gaar ah wada guraa si loo waafajiyo baahidaada.
Tallaabada 1. geliyaan nooca file kasta
Marka aad soo bixi oo lagu rakibay software-ka, si fudud u jiidi-iyo-hoos u aad video files gal sida ay taageeraan ku dhowaad nooca Video Converter Ultimate mid ka mid ah faylka ama qaab. Haddii aad doonayso inaad la qabsato tayada, jir ama heerka yara ee video ah, riix-on Settings midig kor ku xusan loogu badalo button.
Tallaabada 2. muuqaalada Faalladaada
Ka hor inta aadan gubi soo video files gal DVD ah, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad iyaga wax ka bedel. Ka sokow falinjeeerka ama beerista, sidoo kale intaas dheer waxaad kala shakhsiyeeyo kartaa videos la saamaynta gaar ah laga heli karo. Ha illoobin ku saabsan ka kaaftoomi ee degsado software gooni ah haddii aad rabto in aad is geliso subtitles si aad video sida habkaani waxaa dhisay-in aad sahlo. Guudmar itusi aad si fudud iyo in waqtiga dhabta ah si wax isbedel ah ku qancin in si degdeg ah dib karo.
Tallaabada 3. template Select menu
Hadda waxaad dooran kartaa menu aad jeceshahay ka mid ah liiska marto bixiyo ama ku dar-in aad sawirka soo jeeda iyo xataa music. Just magacaabo DVD aad intaas ka dib oo ay doortaan oo tayo leh, muuqa ama iwm, waxaa ka. Marka aad samaysay oo dhan waxaa ka mid ah, guji Guba . Your DVD cusub oo uu diyaar u yahay hadda!
> Resource > Beddelaan > Sidee ayaan u isticmaali karaa Adobe Ciyaar lagu shido DVD A?